YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, July 09
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/09/20140အကြံပြုခြင်း
Nyi Nyi Lwin Pyl
Htun Htun Lwin's photo.
မွန်းတည့်နေ သတင်း ဂျာနယ်မှ အယ်ဒီတာ ၃ ဦးကို
၁၉၅၀ အရေးပေါ်စီမံချက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ (ဃ)၊ ၅ (ည)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပထမအကြိမ် နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဗဟိုလူငယ်ညီလာခံကို ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နှင့် ၆ ရက်နေ့များတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းညီလာခံမှ ဗဟိုလူငယ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင် ၅၇ ဦးကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုဗဟိုလူငယ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များမှနေ၍ အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးပါဝင်သော ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ထပ်မံရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။
၁။ ဒေါက်တာစိုးမိုးသူ( ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး) တာဝန်ခံ
၂။ ဒေါက်တာဝေဖြိုးအောင်(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) တွဲဘက်တာဝန်ခံ
၃။ ကိုကျော်ဇေယျ (ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး) စည်းရုံးရေးမှူး
၄။ မနီနီမေမြင့် (ရခိုင်ပြည်နယ်) အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
၅။ မဇင်နီနီဝင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး) ဘဏ္ဍာရေးမှူး
၆။ ကိုနေစိုးအောင် ( စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး) သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးမှူး
၇။ မစန္ဒီမြင့် (ရှမ်းပြည်နယ်) လုံခြုံရေးနှင့်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူး
၈။ မဇာခြည်မြင့် (ကချင်ပြည်နယ်) လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများရေးရာမှူး
၉။ ကိုခိုင်ညီညီကျော်(ရှမ်းပြည်နယ်) လူထုလူတန်းစားရေးရာမှူး
၁၀။ မကေသီအောင်(ချင်းပြည်နယ်) အဖွဲ့ဝင်
၁၁။ ကိုအောင်ဇမ္ဗူ (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး) အဖွဲ့ဝင်
၁၂။ ကိုနေထက်ဝင်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး) အဖွဲ့ဝင်
၁၃။ မစန်းစန်းမော် (ကယားပြည်နယ်) အဖွဲ့ဝင်
၁၄။ ကိုဇော်ဖြိုးနောင် ( မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး) အဖွဲ့ဝင်
၁၅။ မရည်မာဇော် ( မွန်ပြည်နယ်) အဖွဲ့ဝင်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက ကိုမောင်မောင်ဦး( ၀၉-၄၃၀၅၂၀၃၂) ထံဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ကြေညာချက်အမှတ် ၇/ ၀၇/ ၂၀၁၄
အဖွဲ့ချုပ်နှင့် CRPP အဖွဲ့ဝင်ပါတီများ ဆွေးနွေးပြီး သဘောထား ထုတ်ပြန်ကြေညာ......
‘‘မွန်မြတ်တဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အလွဲသုံးတဲ့ အယူသီးအစွန်းရောက်လုပ်ရပ်တွေ၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာတရားတွေကြား အမုန်းတရားတိုးပွားအောင် လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားနဲ့ယှဉ်တဲ့ နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး အမြတ်ထုတ် လုပ်ဆောင်လာမှုတွေကို ပပျောက်သွားအောင် ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ တည်ဆဲဥပဒေများနဲ့အညီ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိပေး ပြောကြားလိုပါတယ်’’
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မိတ္ထီလာပဋိပက္ခအပြီး ၂၀၁၃ မတ်လ ၂၈ ရက်က ပြည်သူလူထုသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆူပူစေရန်လှုံ့ဆော်မှုများကို ထိရောက်စွာအရေးယူမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ရက်ပိုင်းအတွင်းစတင်ကာ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး အခြေခံသည့် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်များ၊ ပဋိပက္ခများ ဆယ်ခုထက်မနည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားစေသည့် အမုန်းစကားများမှာလည်း အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာများ၊ ပြည်သူများကြားတွင် ဆက်လက်ပျံ့နှံ့နေဆဲဖြစ်သည်။
လတ်တလောဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မန္တလေးပဋိပက္ခမတိုင်မီ ဆူပူစေရန် လှုံ့ဆော်မှုများ၊ ကောလာဟလများ ဖြန့်ချိမှုများမှာလည်း ယမန်နှစ်အတွင်းက တိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံး ငါးကြိမ်ထက်မနည်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ လှုံ့ဆော်မှုများကို အကြိမ်ကြိမ်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သော မန္တလေးမြို့တွင် အားလုံးသိပြီးသည့်အတိုင်း ဇူလိုင် ၁ ရက်မှာတော့ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး အသွင်ဆောင်သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့်ပင် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားစေသည့် အမုန်းစကားလှုံ့ဆော်နေမှုများကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လာသည်။
အင်တာနက်စာမျက်နှာများမှတစ်ဆင့် အမုန်းစကားများ ဖြန့်ဝေနေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံရေးဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်းက ‘‘ဒါတွေကို အရေးမယူတာဟာ အစိုးရရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအတွက် ကိုင်တွယ်တာ အားနည်းတဲ့ အချက်တွေထဲကတစ်ခုပဲ’’ဟု ပြောသည်။
ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များကို ကြည့်ပါက ဘာသာနှစ်ခုကြား ဒေါသထွက်စေမည့် အရေးအသား၊ အွန်လိုင်းဝါဒဖြန့်ချိလှုပ်ရှားမှုများကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမည်ခံ လှုံ့ဆော်သူများရော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမည်ခံ လှုံ့ဆော်သူများပါ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်သူများတွင် နိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌမှစကာ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှစကာ အမည်မဖော်၊ ဓာတ်ပုံမမှန်သူများအထိ ပါဝင်သည်။
ယင်းကဲ့သို့ အမုန်းစကား လှုံ့ဆော်နေသူများကို တည်ဆဲဥပဒေများဖြင့် အရေးယူနိုင်သည့် နည်းလမ်းများလည်းရှိကြောင်း ဥပဒေပညာရှင်များက ထောက်ပြပြောဆိုသည်။
‘‘ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ် အရေးပေါ်စီမံမှု အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ (၅/ည)နဲ့လည်း ဆွဲလို့ရတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ၂၀၀၄ ခုနှစ် အီလက်ထရွန်နစ်ဥပဒေပါ အချက်တွေနဲ့လည်း ဆွဲလို့ရတယ်’’ဟု ဥပဒေပညာရှင် ဦးရောဘတ်စန်းအောင်ကပြောသည်။
ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များတွင် အမုန်းစကားများ၊ ကောလာဟလထုတ်လွှင့်သူများ ရှိသကဲ့သို့ ယင်းကောလာဟလများကို တိုက်ဖျက်၍ သတင်းအမှန်ကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ပြည်သူများကိုလည်း မန္တလေးပဋိပက္ခအတွင်း တွေ့ရသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက ဆူပူရမ်းကားလိုသူများ၏ လှုပ်ရှားမှုများကို အချိန်မီသတင်းပေးဆက်သွယ်သော မန္တလေးမြို့သူမြို့သားများ၏ တာဝန်ကျေပွန်မှုကို အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ပြီး ကောလာဟလများကို မိမိတို့အသိစိတ်ဓာတ်ဖြင့် တိုက်ဖျက်၍ သတင်းမှန်ထုတ်ပြန်ပေးခဲ့သော မန္တလေးသူ၊ မန္တလေးသားများ၊ တာဝန်သိ လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူများ၊ မီဒီယာများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကို ယခုဖြစ်စဉ်တွင် အထင်အရှား မြင်တွေ့ခဲ့ရကြောင်း ဇူလိုင် ၇ ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ရခိုင်ပဋိပက္ခအပြီး ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအသွင်ဆောင်သည့် အကြမ်းဖက်မှုများ၏ နောက်ကွယ်တွင် ကြိုးကိုင်သူများ၊ လှုံ့ဆော်သူများရှိနေသည်ဟု အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများက အစဉ်တစိုက် ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ယင်းကြောင့်ပင် ပဋိပက္ခများကြောင့် မည်သူတွေ အကျိုးကျေးဇူးရရှိသလဲ ဆိုသည်မှာလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ပဋိပက္ခများနှင့်ပတ်သက်၍ ဘာသာရေးကို အသုံးပြုကာ နိုင်ငံရေးလုပ်နေကြောင်း ဇူလိုင် ၄ ရက်က ပြောကြားသည်။
ပဋိပက္ခများသည် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာချိန်တွင် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းမှာ သွေးရိုးသားရိုးလားဆိုသည်မှာ ပြောရခက်ပြီး မမြင်နိုင်သည့် အကြောင်းအရာများ ရှိနိုင်ကြောင်း ရှမ်းနီ (တိုင်းလိုင်) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးစောဝင်းထွန်းကသုံးသပ်သည်။
‘‘အစိုးရအနေနဲ့ အာဏာကို ဗဟိုပြုတဲ့ အစိုးရဖြစ်ရင် ဒါကိုဖက်တွယ်ဖို့ ပဋိပက္ခနဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ဖြစ်ပွားရင် ထိရောက်စွာ အရေးယူဖို့ ပျက်ကွက်တာကို သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်’’
၂၀၁၃ စက်တင်ဘာလအတွင်းက ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် အစ္စလာမ်ဘာသာ သင့်မြတ်စွာနေထိုင်ရေး ဆွေးနွေပွဲ၌ မလေးရှားနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင် ဒေါက်တာချန်ဒရာမူဇာဖာက အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခများအနက် ရခိုင်အရေးမှာ ကွဲပြားသည့် အခြေအနေရှိပြီး ကျူးကျော်ဝင်ရောက်၍ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် တောင်းဆိုနေသူများကြောင့် ဖြစ်ပွားနေရခြင်းဟုလည်း စောင့်ကြည့်လေ့လာသူ ပညာရှင်အချို့နှင့် ရခိုင်အမျိုးသားအင်အားစုများကပြောသည်။
ရခိုင်ပဋိပက္ခနောက်ပိုင်း မန္တလေးတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်)၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးအသွင်ဆောင်သည့် အကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် လူဦးရေ ၄၆ ဦးခန့် သေဆုံးခဲ့ပြီး ၇၀ ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ နေအိမ်၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ၊ ဆိုင်ခန်းများအပါအ၀င် အဆောက်အအုံ ၂၀၀၀ ခန့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။
‘‘မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ရွေးချယ်စရာနှစ်လမ်းရှိပါတယ်။ တစ်လမ်းက ပဋိပက္ခနဲ့ဆင်းရဲခြင်း၊ နောက်တစ်လမ်းက ငြိမ်းအေးမှုနဲ့ တိုးတက်ခြင်းဆီသွားတဲ့လမ်းပါ’’ဟု ဗုဒ္ဓ၀ိပဿနာပြန့်ပွားရေးများကို အနောက်နိုင်ငံများတွင် လုပ်ဆောင်နေသော အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဒေါက်တာဂျက်ကွန်းဖီးလ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် တိုင်းပြည်မှာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရခြင်းထက် ဒေသတစ်ခုပြီး တစ်ခုတွင် ပေါ်ပေါက်နေသော ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းနေရကာ ရှေ့မဆက်နိုင်ဖြစ်နေသည်။
‘‘အကြမ်းဖက်မှုအတွင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြသူများနဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်ပေါ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဖန်တီးခဲ့တဲ့သူများကိုလည်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများနဲ့ အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးခံရမှုများကိုလည်း နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ လုံးဝသည်းခံမှာမဟုတ်ဘဲ ချက်ချင်းပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူဆောင်ရွက်မှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်း ထပ်လောင်းပြောကြားအပ်ပါတယ်’’ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်က မန္တလေးပဋိပက္ခအပြီး ဇူလိုင် ၇ ရက်တွင် ပြောပြန်သည်။
လတ်တလော ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ပဋိပက္ခများသည် လူတစ်စု၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် တမင်ဖန်တီးလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သမ္မတကဆိုသည်။ သို့သော် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းက လုပ်နေကြောင်းကိုမူ ပြောဆိုခြင်းမရှိပေ။
‘‘လက်ရှိမန္တလေးမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခကို သင်ခန်းစာယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြားမည်သည့်နေရာဒေသမှာမှ ထပ်မံမဖြစ်ပွားဖို့နဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ပျက်ပြားစေမယ့် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကိုလည်း တရားဥပဒေနဲ့အညီ ပြတ်သားစွာ အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ပြည်သူအားလုံးက အစိုးရနဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြားရင် နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်’’ဟု သမ္မတကဆိုပါသည်။
သို့သော် အမုန်းပွားစေသော ပြောဆိုမှုများ၊ အန္တရာယ်များသော ပြောဆိုရေးသားမှုများ၊ လှုံ့ဆော်သူများ၊ ပဋိပက္ခများတွင် ပါဝင်သူများကို အစိုးရက ထိရောက်စွာ အရေးယူမှုမရှိ၍ ပြည်သူအများစုကတော့ အစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှု နည်းနေသည်။
‘‘ဒီအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းဟာ ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်လို့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘက်မလိုက်ဘဲ ချက်ချင်းအရေးယူပေးဖို့ လိုအပ်တယ်။ အကြမ်းဖက်မှုကို ဖြစ်ပွားစေတဲ့ စကားတွေ၊ အသုံးအနှုန်းတွေ၊ ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ရင် ချက်ချင်းအချိန်မဆိုင်းဘဲ အရေးယူပေးဖို့ ပြောချင်ပါတယ်’’ဟု စာရေးဆရာဆူးငှက်က ပြောသည်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်မှ အထည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးဖုန်းက ‘‘ပဋိပက္ခဖြစ်တဲ့နေရာတွေက လူမြင်ကွင်းတွေမှာဖြစ်ပြီး တရားခံတွေကို ဖမ်းလို့မမိတာတွေက ပိုပြီးဆိုးရွားစေတာပေါ့။ ဒီလိုတရားခံတွေကို ဖမ်းလို့မရဘူးဆိုတာတွေက အားနည်းချက်တစ်ရပ်လို့ ထင်တယ်’’ဟု ပြောသည်။ ။
မန္တလေးမြို့ လုံခြုံရေးယူရန်ရောက်ရှိနေတဲ့ စစ်ကားများ မန္တလေးနန်းတွင်းကနေ
၇၈ လမ်း မျက်ပါးရပ်စစ်တပ်ဝင်းသို့ ယနေ့နေ့လည် တစ်နာရီခန့်က တပ်ပြောင်းရွှေ့
နေစဉ်။မန္တလေးမြို့မှာ ယခုလဆန်းပိုင်းက ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကာ မန္တလေး ၇
မြို့နယ်ကို ပုဒ်မ ၁၄၄ ည ၉ နာရီမှ မနက် ၅ နာရီထိ ညမထွက်ရအမိန့် ထုတ်ပြန်
သတင်းဓါတ်ပုံ-The Modern News Journal.
ကွမ်းယာဆိုင်က ကုလားလေး စပ်ပေးလိုက်တာ